पल्लो क्याबिन | कथा | राजेन्द्र पराजुली | दशैं साहित्य विशेष
पल्लो क्याबिनमा बिस्तारै एउटा छायाँ प्रवेश गर्‍यो । छायाँ स्त्रीदेहको थियो । छायाँ समुद्रसरी लहरिंदै अघि बढिरहेको थियो । पानीको लहरजस्तै हिंडाइ पनि लयमा थिएन । पाइला असन्तुलित देखिन्थे ।
साँझ पातलै थियो, रमरमखालको । त्यो रमरममा क्याबिनमा लगिएको बिरामी कुनै महिला हुन् भन्ने चिन्न गाह्रो थिएन । उनको लामो तर असरल्ल कपालका कारण मैले थाहा पाइहालें, उनी महिला हुन् भन्ने ।
त्यहाँ आइसोलेसनका लागि २० वटा क्याबिन बनाइएको थियो, सरकारी विद्यालयको चौरमा । क्याबिनमा लगिएकी ती महिला अन्तिम बिरामी थिइन्, त्यहाँको । म उन्नाइसौं नम्बरमा परेको थिएँ । मेरो क्याबिन १९, तिनको २० नम्बर ।
आइसोलेसन क्याबिनमा बस्दा अपनाउनुपर्ने विधि, पानीको भाँडो, औषधिलगायतका विषय र अन्य सामानका बारेमा जानकारी दिइरहेकी थिइन् नर्स । त्यस्तै जानकारी मलाई पनि तिनै नर्सले दिएकी थिइन्, सात दिनअघि ।
म आफ्नो क्याबिनसँगै जोडिएको अर्को क्याबिनमा प्रवेश गर्दै गरेकी ती बिरामी महिलालाई पातलो पर्दा हटाएर चियाउँदै हेर्न थालें । ओछ्यानमा सुत्दासुत्दा मेरो टाउको भारी भइरहेको थियो । ओछ्यान दिक्कलाग्दो स्थान बनेको थियो । शरीर जता छोए पनि दुख्ने भइसकेको थियो ।
‘कत्ति लामो कपाल ! ठ्याक्कै अरुपमाको जत्रै ! हाइट पनि त्यत्रै, पाँच फिट दुई इन्च ।’
मेरा मुटु एक पटक स्याइँय गर्‍यो । मुटुले सोचेको कुरा दिमागमा पुग्यो ।
दिमागले भन्यो, ‘कस्तो वाहियात कुरा सोचेको मुटु तिमीले ? अरुपमा त आफ्ना पति र एक सन्तानका साथ अमेरिकामै स्थायी बसोबास गर्न थालेको दश वर्ष भइसकेको छ ! यो अवधिमा उनी एक पटक पनि नेपाल फर्किएर आएकी छैनन् । उनले त आफ्नो एकजना मिल्ने साथीलाई यो जुनीमा नेपाल फर्कनै नपरोस् भनेकी थिइन् र त्यसको मुख्य कारण तिमी नै थियौ । अर्को कुरा प्रिय मुटु, अरुपमाले यो दुनियाँमा यदि कसैलाई घोर घृणा गर्छिन् भने त्यो तिमी नै हौ । यतिखेर अरुपमा यो आइसोलेसनमा कसरी ? असम्भव कुराको कल्पना किन गर्छौ मुटु !’
मलाई दिमागको कुरामा विश्वास लाग्यो । म चुपचाप क्याबिनभित्रको ओछ्यानमा पल्टिएँ । सिरानीमा राखिएको किताब छुनै मन लागेन । त्यसलाई पर सारिदिएँ । टाउको खुब दुखिरहन्छ, त्यसैले एउटा किताबको दुईचार पृष्ठ मात्रै पढेको छु । आइसोलेसनमा आउँदा मैले तीन वटा किताब बोकेको थिएँ । दुई वटालाई त मैले स्पर्श पनि गरेको छैन ।
पानी पर्न नसकेर धुम्मिएको आकाश जस्तै लागिरहेको छ मलाई यो एक साताको आइसोलेसन बसाइ । डाक्टरले शुरुमा त चार–पाँच दिनमात्रै बस्नुपर्ने बताएको थियो । तर कतिपयलाई सङ्क्रमणको पुष्टि हुन तीन सातासम्म लागेपछि मेरो पनि एकान्तवास लम्बिएको छ । आज सातौं दिन । तर पनि मेरो शरीरमा कोरोना भाइरस पुष्टि भइसकेको छैन । अब पालो आएको छ, अर्को विधि पीसीआरको । थाहा छैन, त्यो विधिबाट मलाई कहिले परीक्षण गरिने हो । देशभरि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दो छ । परीक्षण गर्ने किटको अभाव देखिंदै गएको छ । आरडीटीबाट गरिएको परीक्षण विश्वसनीय देखिएको छैन । डाक्टरहरू नै उक्त विधि काम नलाग्ने बताइरहेका छन् ।
म पालो पर्खिएर बसेको छु, शरीरमा उक्त विषाणु प्रवेश गरेको छ कि छैन भनी जान्न । अझै कति दिन लाग्ने हो त्यो थाहा पाउन ! परीक्षण हुने कहिले र त्यसको रिपोर्ट आउन पनि कति दिन लाग्ने हो ! अनि रिपोर्ट के आउने हो– पोजिटिभ कि नेगेटिभ ? नेगेटिभ आए त ठीकै छ, पोजिटिभ आयो भने ? फेरि कति दिन अस्पताल बस्नुपर्ने हो ? मरिए त ठीकै हो, बाँचियो भने बाँकी दिन कसरी बिताउने ?
उफ् कति धेरै प्रश्न जन्मिएका हुन्, यो एकान्तवासमा ? टाउकोमा प्रश्नबाहेक अर्थोक केही पनि नभएको जस्तो ! टाउकोलाई प्रश्नहरूको एउटा ठूलो कारखाना नाम दिन मन लाग्यो ।
धुम्मिएको आकाश न बोलेको छ न त बर्सिएको नै ! अँध्यारो अनुहार लगाएर बसेको छ, औधी रिसाएको मानिसले जस्तै । अरुपमा र म छुट्टिएको दिन जस्तै, त्यो दिन उनको अनुहार यस्तै थियो । मानौं, आकाशको छातीमा ठूलो पीडा अड्किएको छ । मान्छे जसरी रुन पाउँदा आफूलाई हल्का महसूस गर्छ, त्यसैगरी आकाश पनि आँसु फेर्न पाउँदा स्वच्छ देखिन्छ । अरुपमासँग अन्तिम भेट भएको दिन म पनि त्यसैगरी धुम्मिएको थिएँ । आँसु झर्न मानिरहेको थिएन । मुटुमा गह्रौं सिलढुङ्गाले थिचेजस्तो भएको थियो ।
हामीले खुब झगडा गरेका थियौं । विगतमा एकअर्काले गरेका गल्ती र कमजोरीको खाता खोलिरहेका थियौं हामी । हाम्रो प्रयास थियो– एकले अर्कोको बढी गल्ती र कमजोरी देखाउने । एकअर्कामा थुक्ने र हिलो छ्याप्ने प्रयत्न निकै बेर चलेको थियो । कुनै बेला साह्रै प्रिय लाग्ने एकअर्काको थुक त्यो समय संसारको सबैभन्दा अप्रिय र घिन लाग्ने वस्तु बन्न पुगेको थियो । जतिसक्यो छिटो त्यसलाई पुछ्ने होड चलेको थियो । हामीबीच एकअर्काप्रतिको घृणा चुलिएर अधिकतम बिन्दुमा पुगेको थियो । त्यो प्रतिस्पर्धामा हामी दुवै नराम्ररी पराजित भएका थियौं । दुवैको जित्ने दाउ अन्त्यमा हारेको थियो । तर हामी आफूले जितेको भ्रममा छुट्टिएका थियौं !
आफूलाई बलियो प्रमाणित गर्न हामीले प्रेम टुटेको दुई महीनामै विवाह गरेका थियौं । दिनको हिसाबले मलाई अरुपमाले जितेकी थिइन् । उनको विवाह मेरो भन्दा तीन दिनअघि भएको थियो ।
मलाई सामान्य ज्वरो र हल्का रुघाखोकी लागेको छ । ज्वरो न त बढेको छ न घटेको नै । एक सय एकमा अड्किएको छ । अघिपछि म सय ज्वरोलाई सहजै सहन सक्थें । टाउको खुबै दुखिरहेको छ । म बस्ने अपार्टमेन्टका छिमेकीले मेरो अवस्था थाहा पाएपछि स्थानीय सरकारले तयार पारेको आइसोलेसनमा गइहाल्न सल्लाह दिए । तिनको सल्लाह मलाई उचित नै लाग्यो ।
मलाई राखिएको आइसोलेसन अपार्टमेन्टबाट बढीमा दुई किलोमिटर टाढा होला । अपार्टमेन्ट निकै ठूलो छ, सम्भवतः नेपालको सबैभन्दा ठूलो त्यही नै हुनुपर्छ । पाँचसय परिवार बस्छन् त्यहाँ । अपार्टमेन्ट कोरोनाको इपिसेन्टर बन्ने खतरा मडारिरहेको छ । थाहा छैन, को पस्यो त्यो सुन्दर वासस्थानमा कोरोनाको भाइरस बोकेर ! कोरोनाबाहक खोज्नु कि यस अदृश्य भाइरसबाट सङ्क्रमित ? द्विविधामा छ सरकार ।
मानिसहरूको नयाँ दुश्मन यो भाइरस चीनको वुहानबाट युरोप र अमेरिकी मुलुकहरूतिर उड्न थालेपछि मेरो अपार्टमेन्टमा एकजना मित्र आएका थिए । ती मित्र झण्डै दुई दशकअघि नेपाली नागरिकता च्यातेर क्यानडेली बनेका थिए । लामो अन्तरालपछि नेपाल आउँदा तिनले मेरो अपार्टमेन्टमा बस्न दिन आग्रह गरे ।
उनको आग्रह स्वीकार गर्न मलाई कुनै गाह्रो थिएन । एकातिर उनी कुनै समय मेरो मिल्ने साथीमध्येका एक थिए, अर्कोतिर म एक्लो बस्दा निकै दिक्क बनिरहेको थिएँ । म चार कोठे अपार्टमेन्टमा एक्लै थिएँ । मेरा सन्तान र पत्नी कुनै अर्कै गुँडको चराजस्तै उडेर बेलायत पुगिसकेका थिए । म भने यतै उन्मुक्त जीवन बिताइरहेको थिएँ । जब सबै मेरा आफ्ना ठानिएकाहरू मलाई छाडेर हिंडे वा मैले उनीहरूसँगै जाने चाहना राखिनँ तब म वास्तविक जीवन बाँचिरहेको छु ।
दोस्रो तल्लामा रहेको चारकोठे अपार्टमेन्ट मेरो अधीनमा छ । मेरो बेडरुमसँगै एउटा ठिक्कैको बरन्डा छ । बरन्डा मलाई अधिक प्रिय लाग्छ, त्यसको कारण पनि छ । बरन्डाको ठीक अघिल्तिर, बढीमा २० फिटजतिमा एउटा रूख छ । रूख झ्याप्प परेको छ, बाक्लो । त्यसमा गौंथलीको गुँड छ । यस पटक गौंथलीले नयाँ गुँड बनायो । त्यो गुँड बनाउँदा त्यस जीवले धेरै मिहिनेत गर्‍यो । गुँड तयार भएपछि त्यसले आफ्ना सन्तानलाई ल्याएर त्यहाँ राख्यो ।
गुँड त मैले पनि बनाइदिएको थिएँ । तर मेरा सन्तानले त्यो गुँडमा बस्नै मानेनन् । ती उडेर अर्कै नयाँ गुँडको खोजमा निस्के, समुद्रपारिको । तिनलाई मैले निर्माण गरिदिएको गुँड उपयुक्त लागेन ! गौंथलीको गुँड हराभरा छ, त्यसका सन्तानले गुँड छाडेर कतै उडेर गएको मैले देखेको छैन ।
गौंथलीको कथा मैले ती मित्रलाई पनि सिलसिला मिलाएर सुनाएको थिएँ । एकछिन त उनी निकै भावुक भए । त्यो भावुकता मेट्न उनले आफ्नो लगेज खोलेर ह्विस्की निकाले । हामी दुवै भावुकता मेटाउने असफल प्रयास गर्न थाल्यौं, सोही बरन्डामा बसेर । निकैबेर हामी गफियौं । आआफ्ना जीवनको विगत उधार्न थाल्यौं ।
‘मलाई लाग्छ, म भन्दा तिमी खुशी छौ मित्र । कम्तीमा तिमी स्वतन्त्र त छौ, एकबारको जिन्दगीमा मनखुशी गर्न पाएका छौ’, गौंथलीको गुँडतिरको एकाग्रता भङ्ग गर्दै मित्र बोले ।
‘त्यसो होइन होला, म त तिमी बढी खुशी छौ भन्ने सोच्छु । आफ्नो परिवारसँग बस्न पाएका छौ’, मैले भनें ।
‘म परिवारसँगै भएर पनि एक्लो छु । पत्नीसँग भेट हुन पनि मौका कुर्नुपर्छ । सातामा एक दिन भेट हुनै हम्मे पर्छ । चिसो क्यानडामा आफूलाई तातो पार्न हरदम एअरकन्डिसनको सहारा लिनुपर्छ, म पत्नीको तातो खोज्छु तर त्यो असम्भव बन्दै गएको छ । छोराछोरीसँग त महीनौं भेट हुँदैन । उनीहरू कसरी हुन्छ बढी पैसा कमाउने ध्याउन्नमा रहन्छन् सधैं, म भने पाएदेखि बिहानै झ्याप हुन मन पराउँछु । छोराछोरी र पत्नी पैसासँग गहिरो प्रेम गर्छन् । म आफूसँग प्रेम गर्छु । सकेसम्म कामै गर्नु नपरोस् भन्ने सोच्छु, गरे पनि एकदम थोरै समय । उनीहरू मलाई मूर्ख ठान्छन्, म तिनलाई पटमूर्ख मान्छु । तिनीहरूसँग दोहोरो कुरा हुन पनि संयोग जुर्नुपर्छ । एकप्रकारले म डिप्रेसनमा छु मित्र’ उनी निकै भावुक हुँदैथिए, ‘दुई–तीन पटक त सुसाइड गर्न खोजें, तर सकिनँ । आफ्नो माया अधिक लागेर आयो ।’
केहीबेरको मौनपछि उनी फेरि गौंथलीको गुँडतर्फ हेर्न थाले । उनको कुरा सुनेर मलाई बरु आफू नै बढी खुशी हो कि भन्ने लाग्यो । सोचें, ‘म त एक्लो भएरै एक्लो छु । परिवारको बीचमा रहेर पनि एक्लो हुनुजत्तिको पीडादायी क्षण अर्को के होला ? कम्तीमा मैले आजका मितिसम्म सुसाइडको प्रयास गर्नु परेको त छैन !’
हाम्रा गफ अन्त्यहीन थिए । ती सकिने अवस्थामा थिएनन् । कुनै न कुनै प्रकारले गफ स्थगित हुनु अत्यावश्यक थियो ।
महीना दिनको समय लिएर नेपाल आएका ती मित्र विभिन्न मुलुकका सरकारले लकडाउन घोषणा गर्ने सङ्केत देखाएपछि प्लेन टिकट ‘प्रिपोन्ड’ गरेर क्यानडा फर्केका थिए, मलाई रुघाखोकी उपहार दिएर ! केही दिनपछि त मलाई हल्का ज्वरो पनि आउन थाल्यो । बिस्तारै स्वाँस्वाँ पनि हुन थालेको थियो । भर्‍याङ चढ्न गाह्रो पर्न थाल्यो । त्यसपछि अपार्टमेन्टका छिमेकी सशङ्कित भएर स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सूचना गरिदिएका थिए । म बसेको ठाउँको स्थानीय सरकार निकै सक्रिय भएका कारण पनि म तत्कालै आइसोलेसनमा पुर्‍याइएको थिएँ ।
मोबाइलको घडीले रातको बाह्र बजाउनै लागेको थियो । मैले बत्ती निभाएँ । क्याबिन अँध्यारो भएपछि मेरो दिमागको बत्ती बल्न थाल्यो । त्यो बत्ती पुनः सीधै ठोक्कियो केही घण्टाअघि आइसोलेसनमा आएकी अपरिचित नारीको छायाँमा गएर !
तिनको उँचाइ पनि मिल्यो, अरुपमासँग ।
कपालको आकारप्रकार मिल्यो ।
कताकता हिंडाइ पनि मिल्यो ।
शरीरको बनावट पनि मिल्यो ।
मुटु बोल्न थाल्यो– ‘यो दुनियाँमा असम्भव कुरा केही छ र ? अरुपमा नेपाल आएको हुन सक्दैन ? आफू जन्मिएको र हुर्किएको ठाउँ पो हो त ! हरेकलाई आउन मन लाग्छ, उनलाई मन नलाग्ने हुन्छ र !
तिमी मात्र छौ र नेपालमा अरुपमाको चिनजानको व्यक्ति ?’
मलाई जति घृणा गरे पनि जन्मभूमिमाथि नै अनादर गर्न त पक्कै पनि उनले सक्दिनन् । नेपाल आउँदैमा मसँग भेट हुन्छ भन्ने निश्चितता पनि के नै छ र !
क्याबिन बाहिरबाट नारी आवाज आयो– ‘ढोका खोल्नुस् त तपाईंको ज्वरो नापुम् ।’
नर्स हातमा ज्वरो नाप्ने यन्त्र थर्मल गन लिएर उभिएकी थिइन् ।
मेरो ज्वरो यथावत् नै थियो ।
कत्ति गाह्रो यी नर्सहरूलाई पनि ! मध्यरात पनि भन्न नपाइने । न परिवार न आफन्त भन्न पाइने ! बिहान दश बजेदेखि यी नर्स यतिखेरसम्म एकोहोरो खटिएकी छन् । आफूलाई सङ्क्रमण हुनसक्ने कुनै परवाह नै छैन यिनलाई ।
कस्तो समर्पण ! कस्तो असल भाव !
साँच्चै संसारमा सबैको भावना यस्तै हुने हो भने ब्रह्माण्ड कति सुखी हुँदो हो ! मभित्र ती नर्सप्रतिको सम्मान ह्वात्तै उर्लिएर आयो ।
एकैछिनअघि ती नर्सको आवाज आउँदा मेरो दिमागमा अर्कै कुरा खेलिरहेको थियो । २० नम्बरको क्याबिनमा रहेको बिरामीको नाम के हो भनी सोध्न चाहन्थें म । तर तत्कालै त्यो बिर्सिएछु मैले ।
मेरो दिमागमा नर्सको अनुमानित दैनिकी सलबलाउन थाल्यो ।
छिप्पिएको रात क्रमशः कमलो बिहानीमा परिणत हुँदैथियो । क्याबिनमा सिरसिर बतास प्रवेश गरिरहेको थियो । म निद्रा खोजिरहेको थिएँ ।
बिउँझँदा मध्याह्न हुनै लागेको थियो ।
टेबुलमा खानेकुरा सेलाइसकेका थिए ।
मुटु पुनः २० नम्बरतिर सोझिन थालेको थियो । चिन्तित थियो मेरो मुटु २० नम्बरकी बिरामीलाई लिएर, शायद सशङ्कित पनि थियो । प्रश्न गरिरहेको थियो दिमागलाई ‘ती अरुपमा होइनन् भन्ने आधार के ?’ भन्दै ।
फेरि नर्स आइन् । अहिलेसम्म पनि तिनै थिइन् ड्युटीमा । तिनले मेरो ‘स्वाब’ झिकेर लगिन् । ‘अब तपाईंको पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण हुन्छ’ भन्दै । २० नम्बरमा पनि ती नर्स नै पसिन् । शायद उता रहेकी महिलाको पनि सोही विधिबाट परीक्षण हुँदैथियो ।
२० नम्बर क्याबिनबाट चर्को आवाज आयो ।
‘म मर्न चाहन्छु, म मर्न चाहन्छु !’
त्यसबेला म निदाएको रहेछु । उक्त आवाज कतै सपनामा त आएको थिएन ? निश्चित गर्न एकछिन चुपचाप कान ठाडो पारेर बसें ।
सोही आवाज पुनः आयो ।
मोबाइलको घडीमा रातको दश बजेको देखें । बत्तीको स्विच थिचें, त्यो झलमल्ल बल्यो । पर्दा उचालेर दायाँबायाँ हेरें, बाहिर बत्तीको उज्यालो छरिएको थियो ।
महिलाको चित्कार झनै बढेर जाँदै थियो ।
म बसिरहेको ठाउँबाट जुरुक्कै उठें । २० नम्बर क्याबिनतिर जाउँजाउँ लाग्यो । तर दिमागले ‘नजा’ भनिरहेको थियो । एउटी महिला बसेको क्याबिनमा जानु उचित हुँदैन ।
मुटु भने तत्कालै २० नम्बरतिर जान र उनलाई के भएको रहेछ बुझ्न आदेश दिइरहेको थियो । ‘कम्तीमा नर्सलाई बोलाइदिएर मानवीयताको पालना त गर’ भनिरहेको थियो ।
दिमाग शून्य भएर गयो ।
सम्भावित कोरोना सङ्क्रमित किन मर्ने चाहना राख्दैछ ? के भएको छ ती महिलालाई ? मैले आफैंसँग प्रश्न गरें ।
प्रश्नको उत्तर दिने कोही थिएन, न त आफैं दिन सक्थें । प्रश्नबाट दिमाग उछिट्टिएर मुटुमा ठोक्किन पुग्यो ।
‘त्यो आवाज अरुपमाको हो । त्यति लामो समय प्रेमालाप गरेको मानिसको आवाज कसरी बिर्सन सकेको ? के तिम्रो कान कमजोर हुँदै गएको हो ?’
मुटुको प्रश्नरूपी चेतावनीले म पुनः विचलित हुन थालें । दिमागले ‘नजा’ भनिरहे पनि मुटुले मेरो शरीरलाई हिंडाएर २० नम्बर क्याबिनको ढोकाछेउ पुर्‍याइसकेको थियो ।
मैले २० नम्बर क्याबिनको ढोका उघारें । म त्यो क्याबिनभित्र पस्नै लाग्दा बत्ती झ्याप्पै गयो । सबैतिर अन्धकार भयो । बल्लतल्ल म ती महिलाको नजिक पुगें ।
उनी ओछ्यानमा घोप्टो परेकी थिइन् ।
मैले सोधें, ‘के भयो तपाईंलाई, गाह्रो भयो ?’
उनले मेरो प्रश्नको जवाफ दिइनन् ।
‘म मर्न चाहन्छु’ उनले काँपेको स्वरमा भनिन् ।
‘यत्ति नजिकबाट आवाज सुन्दा पनि अझै अरुपमालाई नचिनेको तिमीले ? तिमी अनौठो मानिस रहेछौ ! शायद तिमी अरुपमालाई प्रेम होइन, अर्थोकै केही गथ्र्यौ । तिम्रो मुटुमा प्रेम त्यसबखत पलाएकै थिएन । अरुपमाले तिमीलाई एकोहोरो प्रेम गर्थिन् । सोही कारण तिम्रो प्रेम मध्यान्तरमै टुङ्गियो ।’
मुटु मलाई विश्वस्त पारिरहेको थियो कि, ती अरुपमा नै हुन् भनेर । तर दिमाग त्यो स्वीकार्नै चाहँदैनथ्यो ।
म उनको नजिक गएँ ।
उनलाई सास फेर्न निकै गाह्रो भएको थियो । स्वाँस्वाँ गरिरहेकी थिइन् । मैले उनको हातमा समातेर सिरानीमा टाउको राखिदिएँ । उनले आफ्नो हातले टाउकोमा बेस्सरी हिर्काइन् । उनले पुनः ‘म मर्न चाहन्छु’ भनिन् । दोहोर्‍याइरहिन्, सासको आवाजमा । उनको बोली सुकेको थियो, शायद धेरै कराएर हुनुपर्छ ।
मैले मोबाइलको टर्च बालें, तर उनलाई देख्न सकिनँ । उनी घोप्टिएकी थिइन्, उनको अनुहार छोप्न कपाल पर्दा बनेर उभिएको थियो ।
‘ओहो ! यो हात त अरुपमाको पो हो त !’ मुटु वेगले बोल्न थाल्यो, ‘म कसरी भुल्न सक्छु र अरुपमाको हात ? यो हात उनकै हो ।’
मैले नर्सलाई फोन गरेर बोलाइदिएँ । नर्स दौडँदै आइपुगिन् ।
मेरो देब्रे हातले महिलाको दाहिने हात समातिरहेको थियो ।
‘पाँच वर्षभन्दा बढी प्रेमले समातेको हात पनि चिनेनौ ? यो हात अरुपमाको त हो नि मूर्ख ! शायद तिम्रो प्रेममा कतै खोट थियो । तिमीले शायद मांशल प्रेम मात्रै गरेछौ अरुपमासँग । मुटुभित्रदेखि गर्न जानेनछौ । त्यसैले तिम्रो प्रेम असफल भयो’ मुटु फेरि बोल्न थाल्यो, ‘एकपटक अरुपमा भनेर बोलाऊ त उनी कसरी बोल्छिन् ! बोलाऊ भन्या, छिटो बोलाऊ न ! समय घर्किन लागिसक्यो !’
मुटुको अनुरोध र दिमागले आदेश दिएपछि मैले उनको अनुहार हेर्न पटकपटक खोजें । उनलाई बोलाउन पनि खोजें, खै किन हो बोली फुटेन । मोबाइलको बत्ती पुनः बालें । तर देख्न सकिनँ अनुहार । कपाल अघिल्तिर आएर असरल्ल परिरहेकै थियो ।
मुटुले मलाई दोषी करार गरिदिएको थियो । त्यसले भनिरहेको थियो, ‘एकपटक अरुपमासँग माफी माग, बेस्सरी रोएर आँसु पखाल । के थाहा जीवनमा पुनः हरियाली छाउँछ कि पो ! अवसर हो यो, अघि बढ ।’
मुटुको सल्लाह बेठीक थिएन, तर दिमागले अघि बढ्न दिइरहेको थिएन । ‘तिम्रो के गल्ती छ र अरुपमासँग माफी माग्न ? के दोष थियो तिम्रो ? प्रेम दुवैले गरेको त हो, अहिले एकले मात्रै किन माफी माग्नु ? दुवैले एकअर्कासँग माफी माग्ने कुनै निश्चितता छ भने कुरो ठीक हो, अन्यथा गलत’ त्यसले मलाई भनिरहेको थियो, ‘अनि ती महिला अरुपमा नै हुन् भन्ने के निश्चित छ ? त्यस्तो हात अरू महिलाको पनि त हुन सक्छ ! अधिकांश महिलाको आवाज पनि त उस्तै हुन्छ ।’
नर्सले महिलालाई डोर्‍याएर १० फिटजति पर पुर्‍याइसकेकी थिइन् । बत्ती झल्याक्क बल्यो । त्यतिखेर उनको अनुहार देख्न सक्ने सम्भावना नै भएन ! म उनीहरूको ढाड मात्र देखिरहेको थिएँ । केहीबेरमै दुवैजना मेरो आँखाबाट ओझेल परे ।
मुटु फेरि स्याइँय गर्‍यो ।
म फर्किएर क्याबिनमा आएँ र ओछ्यानमा पल्टिएँ ।
केहीबेर दिमाग र मुटुले खुब झगडा गरे । तर्क–वितर्कका शृङ्खला चले । दुवैका आआफ्ना तर्क थिए, अडान पनि थिए । स्वाभिमान हो कि अभिमान वा घमण्ड, जिद्दी– त्यो पनि थियो उत्तिकै ।
अन्त्यमा जित मुटुको भयो ।